Ingabe unesifiso sokuthenga ifoni ephathekayo, kodwa awufuni ukushiya indlu futhi uchithe isikhathi sokusesha? Khona-ke isitolo se-SotMarket esitolo se-inthanethi siyinto eyokusiza ukuthi uthole lokho okufunayo ngokushesha futhi okungabizi. Enjini ye-Google yokusesha, uzokuhlangana nawe endaweni yesihlanu noma yesithupha. Lapha endaweni enkulu kakhulu kukhona amafoni omculo wesitayela wemikhiqizo yomhlaba ethandwayo, kanye nezesekeli ezihlukahlukene kanye nezingxenye ezisele.
I-SotMarket ukukhathazeka kwesitolo kumakhasimende
E-intanethi ungathola izibuyekezo mayelana nesitolo se- SotMarket kokubili nomdlandla futhi omuhle futhi onganelisekile. Kodwa lokhu akuyona inkomba yokuthi umsebenzi wesitolo uhlelwe kabi. Kwanele ukuhlaziya izibalo zezimpendulo eziqondile ezicatshangelwa ukuthi abantu abaningi, emva kokuthola okufunayo, abafuni ngempela ukuchitha isikhathi ekudumiseni (ngisho noma behlelwe ngokuphelele futhi bahlelwe ngokuphelele kokubili umkhiqizo kanye nemfanelo yesevisi). Kodwa wonke umuntu ufuna ukuveza ukuthukuthela nokukhononda ngezinkinga nokuphazamiseka.
Ngakho-ke, uma uqhathanisa ukubuyekezwa kwe-SotMarket ebhaliwe ngendlela enhle (futhi kunezinkulungwane ezingaphezu kwezingu-3) ngenani elingalungile, ngokushesha ubona isithombe somsebenzi ohleliwe kahle futhi odidiyelwe wabasebenzi besitolo, futhi ubona ngokucacile ukukhathazeka kokuphathwa mayelana nekhasimende ngalinye.
I-Catalogue - isiqinisekiso sokusheshisa kokusesha okufunayo
Ngejubane lokusesha, ikhathalogu yemikhiqizo etholakalayo kuwebhusayithi yeSotMarket ithuthukiswe (ukubuyekezwa mayelana nesitolo kuqinisekisa ukuthi kuyinto elula kakhulu ukuyisebenzisa). Lapha awutholi kuphela amakholi, kodwa futhi namakhamera edijithali, amakhompyutha amathebhulethi, ama-laptops, amashaja, abadlali be-MP3, ama-adapter alalelwayo, amakhadi omemori, izintambo zedatha ye-USB. Kanti futhi i-game consoles, ama-FM-transmitters, ama-headphone, amabhethri, amarekhodi wezwi, ama-USB Flash-drives. Futhi yonke imikhiqizo ihanjiswa ngendlela evulekile kakhulu. I-injini ye-website elula ikuvumela ukuba ugijime ngokushesha kusuka kwelinye ikhasi ukuya kwelinye. Ababonisi esitolo se-intanethi ngendlela enemininingwane enhle futhi enobungane bazochaza futhi bakhuthaze, iyiphi indlela engcono yokukhetha nendlela yokubeka umyalelo.
Ukukhushulwa, izaphulelo nokuthengisa
Ku-SotMarket, ukubuyekezwa kwamakhasimende abongayo kuqinisekisa lokhu, kukhona ukuthengisa okuhlukahlukene njalo. Ngesikhathi esifanayo, amakhasimende anethuba lokuthenga ngokufanelekayo i-elekthronikhi entsha ye-elekthronikhi entsha, abayiphupha kuphela.
Ngaphezu kwalokho, uma uthengisa amayunithi angaphezu kwamabili wezimpahla, uthola ngokuzenzakalelayo isaphulelo ngakwesokudla. Ungenza umyalelo futhi ngenombolo yocingo. Kulesi simo, inani lesaphulelo lizobalwa ngesandla. Isitolo senza izenzakalo ezithakazelisayo, okuyingxenye lapho, unethuba lokuthola izipho ezimangalisayo. Uma ngesitatimende sakho omaziyo wakho uthenge imikhiqizo ye-elektroniki kusayithi, khona-ke ubizwa ngokuthi i-ruble eyikhulu. Futhi, ngaphansi kwezimo ezithile, kunethuba lokumisa ukuthengwa ngesikweletu. Ukuze wenze lokhu, udinga ukugcwalisa isicelo kusayithi. Isinqumo semali mboleko sizokwaziwa phakathi kwemizuzu embalwa.
Isitolo elaseRussia lavula amagatsha angu-93, lapho ungathola khona izimpahla endaweni noma ngokuthumela kwezihambisa. Ungabuye futhi ngokuqondile ngqo kusayithi nge-PickPoint. Izimpahla zifika esiseduzane nawe postmata, kusuka lapho ungayithola khona ngesikhathi esifanele kuwe. Ukukhokhwa kwezimpahla kwenzeka ngqo kwi-terminal ngekhadi lepulasitiki noma ngokheshi. Mayelana nalolu hlobo lokulethwa kwesitolo se-inthanethi esitolo se-SotMarket kwamakhasimende asho okuhle kakhulu. Labo amakhasimende asebenzise le nsizakalo yezinsizakalo ukuthi izimpahla zithunyelwa ngokushesha kakhulu kunokuthunyelwa kweposi kwekilasi lokuqala. Ukuqaphela ukuthi imikhiqizo iphephile futhi ihambisana ngokugcwele nezici ezinikezwe, amakhasimende abonga izinga eliphezulu lenkonzo.
Sezimpahla zokubhukuda, tankini endaweni lolwandle ikhabethe yesimanje